ओमानसँग नेपाल ७-२ ले पराजित
२० वर्षपछि ‘किन यसरी’ : ‘बले’ र श्रीमतीले गर्दा इतिहास दोहोर्‍याउन तयार भए प्रमोद ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
२० वर्षपछि ‘किन यसरी’ : ‘बले’ र श्रीमतीले गर्दा इतिहास दोहोर्‍याउन तयार भए प्रमोद !
गायक प्रमोद निर्वाणले २० वर्षपछि ‘किन यसरी, बिनाअर्थले..’ बोलको गीत बजारमा ल्याए, रिमेक गरेर । वि.सं २०५८ सालमा रचना गरेर २०६० सालमा रेकर्ड गराएको उक्त गीतमा उनले गायिका सरला बिसीको स्वर पनि थपे । यसअघि उनी एक्लैले गाएको गीत हालसम्म पनि युवापुस्ताको मन–मस्तिष्कमा रहन सफल छ ।
सो गीतले साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको छ । इतिहास दोहोर्‍याउनु चुनौतीको विषय पनि हो । इतिहास खराब बनाएमा व्यक्तिगत जीवनमा ठूलै दाग लाग्ने पक्का छ । फिल्म क्षेत्रमा बनेका सिक्वेललाई दर्शकले गाली गर्नु र रिमेकमा गीत बिगार्दा श्रोता बहिस्कार हुनुजतिकै हो । तर अनुभव र म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टसँगको निखारिएको सम्बन्धका कारण निर्वाणले गीत बिगारेनन् । किनकि प्रमोदको साङ्गीतिक अनुभव काँचो छैन अनि उनका सिर्जना कलिला छैनन् ।
किन यसरी गीत २०५८ सालमा कविता हुँदै रचना गरिएको गीत हो । २०६० सालमा रेकर्ड गरेर ‘निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्क’ एल्बममा समावेश गराई सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रमोदले सबैभन्दा सुरुमा रचना गरेको यो गीत समय न्हूँ बज्राचार्यको स्टुडियो ‘डोरेमी पाठशाला’मा रेकर्ड गराएका थिए । त्यतिबेला उनी सङ्गीत क्षेत्रमा कलिला थिए । तर २०७८ सालमा ‘फिल रेकर्डिङ स्टुडियो’मा यो गीत पुनः रेकर्ड गराउँदा उनले आफ्नो अनुभव तिखारेर एउटा हतियार बनाएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
किन यसरी जन्मिनुमा पनि उनी भाइ सिरोज बर्ड र गायक सुनिल बर्देवाको साथ रहेको बताउँछन् । सिरोजले शब्दमा र सुनिलले सङ्गीतमा साथ दिँदा विद्यार्थी बेलामा नै किन यसरी गीत रेकर्ड सम्भव भएको थियो । निर्वाणले किन यसरी कविता लेखेका थिए । उनलाई लागेकै थिएन किन यसरीले इतिहास राख्न सफल हुन्छ भन्ने, यसैले मामाका छोरासमेत रहेका सुनिलले उनलाई कस्तो मोडमा पहिले गाउन सुझाव दिए र सोहीअनुरुप निर्वाणले गाए । गीत हिट भयो । अहिलेसम्म पनि त्यतिकै युटुबमा मानिसहरूले सुन्दै आइरहेका छन् ।
कसरी बन्यो ‘किन यसरी’को रिमेक ?
एक दिन सागर लम्साल ‘बले’ले प्रमोदलाई सोसल मिडियामा म्यासेज गरे । म्यासेजमा उनले प्रमोदसँग काम गर्न चाहेको खुलाए । बलेलाई उनी राम्रोसँग चिन्थे । अझ, पछिल्लो समय यशकुमारको ‘तिम्रो मन बदलिएछ’ बोलको गीत रिमेक गरेपछि बलेको नाम उनको मनमा अझ गढेको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच भेटघाट भयो । सँगै थिए, निर्देशक निकेश खड्का । भेटमा उनीहरूबीच ‘किन यसरी’को रिमेक गर्ने सल्लाह भयो ।
हुनत त्यसअघि पनि प्रमोदकी श्रीमती सम्झना कुँवरले पटक–पटक रिमेक गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । तर प्रमोदले रिमेक गर्न मन गरेका थिएनन् । राम्रो टिम पाएका कारण उनले बले र निकेशलाई मन्जुरी दिए । ‘रिमेकका लागि धेरैको आग्रह–अनुरोध थियो । एक त मन नै बनेको थिएन अनि अर्को इतिहास बिग्रन्छ भन्ने डर थियो’, उनी भन्छन्, ‘साङ्गीतिक यात्राको थालनी गरेदेखि नै साथ दिएकी सम्झनाले भनेपछि रिमेक गर्नेबारे सोच्न थालेको थिएँ । सागरजीको टिमसँग काम गर्ने जोश आयो र रिमेक बनाउने निधो गरेँ ।’
त्यसपछि प्रमोदले साथी अशोक महर्जनको स्टुडियो ‘फिल’मा रेकर्ड गराए । प्रमोदलाई गायिका सरला बिकले साथ दिइन् । ‘२० वर्षपछि पुनः स्टुडियोमा त्यही गीत गाउँदा अलि म्याचुअर्ड फिल गरेँ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला यो क्षेत्रमा कलिलो थिएँ । अहिले झन् गीतमा मिठास आएको अनुभव भयो । प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै पाएको छु । अलिकति परिवर्तनचाहिँ लेडिज स्वर दिएर गरेको छु ।’
हल सञ्चालक भन्छन्– फिल्म भए दसैँमा नत्र तिहारमा मात्र खोल्छौँ
रोजिना गिरी शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरण : प्रहरी अनुसन्धान फित्तलो भएको आफन्तको आरोप